Pyrroloquinoline quinone disodium ဆား (122628-50-6) - Phcoker
မတ်လ 16, 2020
PQQ သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ် cofactor အဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Pyrroloquinoline quinone disodium ဆား (122628-50-6) ဗီဒီယို
Pyrroloquinoline quinone disodium ဆား (122628-50-6) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ထုတ်ကုန်အမည် Pyrroloquinoline quinone disodium ဆား (122628-50-6)
ဓာတုအမည် Pyrroloquinoline quinone ဆိုဒီယမ်ဆား; disodium 4,5-dihydro-4,5-dioxo-1h-pyrrolo (2,3-f) quinoline-2,7,9-tricarboxylat; PQQ, Pyrrolo-quinoline-quinone disodium ဆား; sodiuM 9-carboxy-4,5 -dioxo-4,5-dihydro-1H-pyrrolo [2,3-f] quinoline-2,7-dicarboxylate; PQQ disodium
CAS အရေအတွက် 122628-50-6
Monoisotopic Mass 373.976304 g / mol
အရည်ပျော်မှတ် > 300 ℃ (ထို assay အတွင်းပြိုကွဲပျက်စီး)
သိုလှောင်မှုအပူချိန် 2-8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
လြှောကျလှာ Pyrroloquinoline quinone (PQQ) disodium ဆားကိုယူနိုက်တက်စတိတ် (ယူအက်စ်) တွင်၎င်း၏အာဟာရတန်ဖိုးဖြစ်သောစွမ်းအင်၊ အားကစားနှင့်အိုင်ဆိုတွန်အချိုရည်များကဲ့သို့သောအစားအစာများတွင်အသုံးပြုရန်အဆိုပြုထားသည်။ နို့မဟုတ်သောအခြေခံအစာအစားထိုးအဖျော်ယမကာများ၊ ရေ (ပုလင်းတိုးမြှင့်ခိုင်ခံ့); နို့ -based အစားအစာအစားထိုးအဖျော်ယမကာ; သီးနှံနှင့် granola အရက်ဆိုင်; နှင့်စွမ်းအင်, အစားအစာအစားထိုးနှင့်ခိုင်ခံ့သောအရက်ဆိုင်။
Pyrroloquinoline quinone disodium ဆား (PQQ disodium ဆား) ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
PQQ သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗိုက်တာမင်အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုပထမဆုံးဗက်တီးရီးယားတွင်အင်ဇိုင်းဓာတ်ပြုမှုအတွက် cofactor အဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်လူသားများအတွက် B ဗီတာမင်များနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည် oxidoreductase အခြေခံသည်၊ အချို့သောအဏုဇီ ၀ သက်ရှိများ၊ အပင်များနှင့်သတ္တဝါများတစ်ရှူးများတွင်တည်ရှိပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်မှု၏ catalytic oxidation တွင်ပါ ၀ င်သည်သာမကအထူးဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအချို့လည်းရှိသည်။ PQQ ၏သဲလွန်စသည်ဇီ ၀ သက်ရှိများ၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းကိုတိုးတက်စေပြီးအလွန်အဖိုးတန်သည်။
ဘယ်လို Pyr ပါသလဲroloquinoline quinone disodium ဆားအလုပ်?
Pyrroloquinoline quinone disodium ဆားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များရှိစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအခန်းတွင်ပါဝင်သောအဓိကအင်ဇိုင်းများနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည် - mitochondria၊ ကုထုံးသည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ Pyrroloquinoline quinone disodium salt အစွမ်းထက် antioxidant အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းအပြင်၎င်းသည် mitochondrial ပျက်စီးမှုကိုလည်းကာကွယ်နိုင်သည်။ mitochondria ကို oxidative stress မှကာကွယ်ပေးရုံသာမကသက်ကြီးရွယ်အိုဆဲလ်များ၌အလိုအလျောက်မျိုးဆက်သစ်များကိုထပ်မံဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Pyrroloquinoline quinone disodium ဆား၏အကျိုးကျေးဇူးများ
Pyrroloquinoline quinone disodium ဆားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များတွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်သောသဘာဝဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူ့အကျိုးအတွက်ကောင်းသည်။
- ကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့် ဦး နှောက်ပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုကိုကူညီပါ။
- အမိုင်နိုအက်ဆစ်များစုပ်ယူခြင်းကို romote;
- တက်ကြွနေသော NK ဆဲလ်များ၊
- တိုးမြှင့်ကူးယူအချက်များ antioxidant လမ်းကြောင်း activate;
- mitochondria အသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆယ်လူလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်
၏လျှောက်လွှာ Pyrroloquinoline quinone disodium ဆား
Pyrroloquinoline quinone disodium ဆားသည် Pyrroloquinoline quinone ၏ disodium ဆားဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Pyrroloquinoline quinone နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
Food Style ဆေးဂျာနယ်၌ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတွင် Pyrroloquinoline Quinone သည်ကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အသက်၊ လေဖြတ်ခြင်း (သို့) neurodegenerative disorders ကြောင့်မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှု (မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ သင်ယူခြင်းအခက်အခဲစသည်တို့) ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်နှလုံးနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ischemic ဖြစ်ရပ်များမှကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည်။ အလားတူရလာဒ်များကို ၂၀၁၁ နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုတွင်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Pyrroloquinoline Quinone သည်နို့အခြေစိုက်အစာအစားထိုးအဖျော်ယမကာကဲ့သို့သောအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ချက်အဖြစ်တိုက်ရိုက်ပေးခဲ့သည်။
ကြွက်များအတွင်းရှိ pyrroloquinoline quinone (PQQ) disodium ဆား (BioPQQ ™) ၏နာခရိုမီတာ၊ တာကဟာရှီ H၊ Koura S၊ Chung C၊ Tafazoli S၊ Regul Toxicol Pharmacol ။ 1 အောက်တိုဘာ; 2014 (70): 1-107 ။ Doi: 21 / j.yrtph.10.1016 ။ Epub 2014.06.024 ဇူလိုင် 2014. PMID: 1 ။
 Itoh Y၊ Hine K၊ Miura H၊ Uetake T၊ Nakano M၊ Takemura N၊ Sakatani K. သိပ္ပံနည်းကျလုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် Antioxidant Supplement ၏ Pyrroloquinoline Quinone Disodium ဆား (BioPQQ ™) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Adv Exp Med Biol ။ 2; 2016: 876-319 ။ Doi: 325 / 10.1007-978-1-4939-3023_4 ။ PMID: 40 ။
 Nakano M၊ Kawasaki Y, Suzuki N, Takara T. Pyrroloquinoline Quinone Disodium ဆားစားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ကျန်းမာသောဂျပန်အရွယ်ရောက်သူများ၏သွေးရည်ကြည်လက်စထရောအဆင့်တွင်။ J Nutr သိပ္ပံဗီတာမင် (တိုကျို) ။ 3; 2015 (61): 3-233 ။ Doi: 40 / jnsv.10.3177 ။ PMID: 61.233 ။
 Rucker R၊ Chowanadisai W၊ pyrroloquinoline quinone ၏ Nakano M. အလားအလာရှိသောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအရေးပါမှု။ Altern Med Med Rev. (၂၀၀၉)
 et al Noji N ကို။ အမျိုးမျိုးသောအစားအစာများတွင် pyrroloquinoline quinone (PQQ) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်ရိုးရှင်းသောနှင့်အထိခိုက်မခံသောနည်းလမ်းသည်အရည် chromatography / electrospray-ionization တွဲဖက်အစုလိုက်အပြုံလိုက် Spectrometry ။ J ကို Agric စားနပ်ရိက္ခာ Chem ။ (၂၀၀၇)